Ubuntu Cinnamon ngoku iyafumaneka kwinguqulelo yokuqala yovavanyo | Ubunlog
Sele lixesha oko sipapasha inqaku lokuqala malunga ICinnamon yoBuntu Apha ku-Ubunlog. Yiprojekthi ethatha amanyathelo okuqala, kodwa kukho izikhombisi ezenza ukuba sicinge ukuba iya kuba yincasa esemthethweni yenombolo 9 yosapho lakwa-Ubuntu. Ayizukuza njengokhuphiswano nokuba ungatyikityi iLinux Mint, kodwa iya kuba yinto enomdla kakhulu abaninzi bacinga ukuba ifanele ukuba iyeza ngokukhawuleza. Akukho mhla wokukhutshwa kwinguqu ezinzileyo okwangoku, kodwa umfanekiso wokuqala sele ukhutshiwe osivumela ukuba sibone ukuba basebenza phi.
Kodwa ngaphambi kokuba uqhubeke neli nqaku okanye ubonelele ngekhonkco lokukhuphela, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni: yinguqulelo yesilingo, esivumela ukuba sinxibelelane okokuqala, kodwa ayikhuthazwa kwaphela ukuyifaka kwizixhobo zemveliso. Intloko yeprojekthi okwangoku eyaziwa ngokuba yi-Ubuntu Cinnamon Remix okanye nje iCinnamon Remix icebisa ukuvavanya umfanekiso kumatshini oqinisekileyo, kuba i-EFI ayisebenzi kubo njengoko kufanelekile.
Zama Ubuntu Cinnamon ngoku kwiibhokisi ze-GNOME
Ukuchazwa apha ngasentla, ikhonkco lokukhuphela Ubuntu Cinnamon ISO yokuqala enye. Njengeenguqulelo ze-Ubuntu zemihla ngemihla zokwakha, ubunzima obukhoyo bomfanekiso bungaphezulu kwe-2GB, ekungafuneki ukuba yingxaki kuba kufuneka siyisebenzise kumatshini oqinisekileyo. Ngokwam, ngalo lonke ixesha kufuneka sivavanye i-distro enje ngale Cinnamon Remix, ndingacebisa ukuyenza Iibhokisi zeGNOME. Nangona inokubonisa iingxaki ngakumbi kuneVirtualBox kwiinkqubo ezisebenza njengeKubuntu, eyona nto ixhaphakileyo kukuba sinokwenza iimvavanyo kwangoko, kuba ayizukubonwa kwifestile encinci njengakwisoftware eyaziwayo yeOracle.
Kwaye siza kubona ntoni xa sizama Ubuntu beCinnamon ISO yokuqala? Ndithe: unxibelelwano lokuqala apho sibona Ubuntu obunepaneli esezantsi njengeLinux Mint, ilogo ye-Ubuntu Cinnamon kunye nomxholo kunye nokusetyenziswa okukhethwe yile projekthi, njengeLibreOffice 6.3.2, iFirefox 70, iRhythmbox okanye iGIMP. Ukongeza, kubandakanya iindaba ezivela ku-Eoan Ermine, njengekernel Linux 5.3. Into ebethayo kukuba ihamba kakuhle ngaphandle kokuyiqhuba kumatshini obonakalayo, kwaye ayisiyonto esinokuyithetha ngayo yonke le nkqubo yokusebenza.
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona ndlela yokwazi ukuba yintoni i-ISO okwangoku kukuyikhuphela kwaye uyivavanye (kumatshini obonakalayo, ulumke), kodwa sikushiya nescreen.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ngaba uyafuna ukuzama Ubuntu Cinnamon? Inguqulelo esivumela ukuba sibone ukuba basebenza phi ngoku iyafumaneka
Khuphela iifayile ngokulula kwisiphelo se-Ubuntu
I-Linux 5.4-rc5 ifikile inkulu kunesiqhelo emva kokukhutshwa okuncinci